GIMP ကို ​​Photoshop ၏အသွင်အပြင်ပေးပါ Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမင်းကိုဘယ်လိုပြခဲ့သလဲ GIMP ကို ​​Photoshop CS6 ၏အသွင်အပြင်ကိုပေးပါဒါပေမယ့်ဒီနည်းလမ်းမှာအားနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာပါ GIMP အရောင်မှောင်မိုက်။ ဤညှိနှိုင်းမှုအမျိုးအစားသို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲသူတို့အသုံးပြုသူများ၏ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီရာတွင်အဆင်ပြေပါသည် photoshop ကို tools တွေကိုမှ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်.
မှတဆင့် Webupd8 ငါအလင်းရောင်အရောင်များနှင့်အတူ, ဤအချိန်, ထိုသို့ပြုမှအခြားနည်းလမ်းအကြောင်းကိုရှာတွေ့; ဒါ့အပြင် Photoshop လိုပဲ keyboard shortcut များကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဘေးဘက် panel များကိုလည်း Adobe tool နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဤသည်ငါ၏ KDE အတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်:
El ကို Hack + ၏လက်မှလာသည်Martin Owen ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် GIMP configuration folder ကိုလက်တွေ့အသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤ hack ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် GIMP တွင်သတ်မှတ်ထားသော ဦး စားပေးမှုများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်
1 GIMP ကို ​​Photoshop ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေးပါ
ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကစာမျက်နှာကိုသွားကြည့်ပါ Deviantart အပေါ်မာတင် Owen အောက်ပါဖိုင်ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပါ။
GIMP အတွက် Photoshop Tweaks ကို download လုပ်ပါ
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ / home ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ GIMP configuration folder ကိုအရန်ပြုလုပ်သည်။
ဤချိန်ညှိချက်များကို GIMP 2.8 အတွက်ဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် GIMP 2.9 (သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမည်သည့်ဗားရှင်း) ကိုမဆိုအသုံးပြုလျှင်အားလုံးအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများသည်စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်နိုင်သော်လည်းအိုင်ကွန်များနှင့်ပြproblemနာအနည်းငယ်သာရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂.၈ ထက်ပိုသောဗားရှင်းဖြင့်ပြုလုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်မှာ -
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ / home တွင် unzip လုပ်ပါ၊ ၎င်းတွင်ဖိုင်တွဲဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် .gimp-2.8 ဒါကြောင့်ပါပဲ။
အကယ်၍ ပိုမိုမြင့်မားသော GIMP ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါက .gimp-2.8 ဖိုင်တွဲကို ~ / .config / GIMP / သို့ကူးယူပြီး ၂.၉ ဟုအမည်ပြောင်းပါ။
rm -r ~ / .gimp-2.8 mv ~ / .gimp-2.8- အရွယ် ~ / .gimp-2.8
GIMP 2.9+ အတွက်:
rm -r ~ / .config / GIMP / 2.9 mv ~ / .config / GIMP / 2.9- အရွယ် ~ / .config / GIMP / 2.9
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GIMP ကို ​​Photoshop ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေးပါ
34 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အမှန်တရားကတော့ multi-window applications တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့လူစုလူဝေးတွေမှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အလွန်အသုံးဝင်တယ်။ သူတို့က GIMP မှာဒီအကြောင်းတွေအများကြီးတိုင်ကြားတယ်။
GIMP ကို ​​၂.၈ ကတည်းကရိုးရိုး menu option ဖြင့် Single Window သို့ပြောင်းသည်
၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုတည်းသာမကဘဲအိုင်ကွန်များနှင့်ဘောင်ကွက်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏ post elav မှကျွန်တော်နားလည်ပါသည်။ သို့သော် Jorge-1987 ပြောဆိုသည့်အရာနှင့်ကိုးကားထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အဖြေပေးပါသည်။ “ အမှန်တရားကဒီနေရာမှာအသုံးများတဲ့လူသုံးများတဲ့အသုံးအဆောင်များကိုအသုံးမပြုသူများ၏အဖွဲ့များတွင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ GIMP မှာသူတို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးညည်းညူကြတယ်။ ” ငါနားလည်တဲ့အတိုင်းသူကသူတို့ကိုနှေးကွေးစေတာက multi-window mode ဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ပါ icon များသို့မဟုတ်ပြား၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ခြားနားချက်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ငါမသိဘူး အသုံးပြုသူအတိအကျရိုက်လိုက်သည့်အရာကိုသာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် .. ငါ understood နားလည်ခဲ့တယ်
ကောင်းပြီ၊ ဒီနည်းနဲ့သင်ဟာမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်စလုံးမှနေရာလွတ်ကိုစားပြီးအောက်ခြေမှာအပေါက်များကျန်နေတယ်။ သင့်မှာ ၂၈ လက်မဖန်သားပြင်မရှိပါက၎င်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်ဟုမထင်ပါ။
ယခု toolbox မှ (အဓိကနှင့်အလယ်တွင်အရောင်ပါသောအကွက်နှစ်ခု) အရောင်ပေးသော dialog မှဤနည်းဖြင့်ဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင် toolbox ကိုအိုင်ကွန် (သေးငယ်) တစ်ခုတည်းသို့လျှော့ချနိုင်ပြီး Windows တွင်သင်ယူဆောင်လာပါလိမ့်မည်။ အလွှာများနှင့်အတူညာဘက်ကော်လံမှအရောင်ပေးတဲ့ dialog ။
ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည် ၂၁ လက်မမော်နီတာတွင်နေရာများစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
အလွန်ကောင်းသော post ကို😉
စကားမစပ် Elav စကားပြောတာကဒါကငါပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါပုံတွေကိုနှိပ်လိုက်ရင်အရွယ်အစားကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူး၊ သူတို့ကတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါရှာတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီအတူတူပါပဲ ... အခုအသေးစိတ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ ကောင်းတယ် !!
ဘယ်ဘက် panel ရှိအရောင်ရွေးသူအောက်ရှိစာသားကိုမဖယ်နိုင်သလား။ မင်းတို့အဲဒါတွေကိုတည်းဖြတ်ပြီးမင်းဖမ်းယူတာတွေထဲကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ငါထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအစားပိုပေါ့တဲ့မီးခိုးရောင်သေတ္တာထဲမှာအစင်းသေးသေးတွေရှိတယ်။
Joksan ပါ ဟုသူကပြောသည်
hover zoom extension ကိုသင်၏ browser တွင်ထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းသည်သင့်ကိုကလစ်တစ်ချက်တောင်ကယ်တင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဆိုဒ်များစွာအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
တရားသူကြီး ၈) ဟုသူကပြောသည်
Gimp အတွက် icon theme packs တွေကိုဆက်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတော့ Photoshop icon တွေကိုသုံးမယ့်အစား Symbolic icon ကိုသုံးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကပိုကောင်းတယ်၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုရှိတယ်၊ အချိန်အတော်ကြာမှာကျွန်ပ်တို့နှစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ တစ်ခုကအလင်းရောင် desktop themes များနှင့်နောက်တစ်ခုကတော့မှောင်မိုက်သော themes များအတွက်ဖြစ်သည်။
jEsuSdA 8 ကိုစာပြန်ပါ)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jesusda !!! သင်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးအတွက် Desdelinux ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Open Source နေရာတိုင်းရပ်ရွာ !!! 🙂
ငါ့မှာ GIMP 2.8.10 ရှိတယ်၊ ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး
~ / .gimp-2.8 ကိုဖျက်ပစ်ပါ
~ / အတွင်းရှိ ZIP မှ .gimp-2.8 ဖိုလ်ဒါကိုဖြုတ်ပါ။
ငါ၌ရှိ configuration ကိုဖျက်ပစ်သော်လည်းငါကငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဘူး ငါဘာအမှားလုပ်နေတာလဲ
PS: ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ၁၄.၁၀ တွင်ရှိသည်
.gimp-2.8 ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် .gimp-2.8 / themes / folder သို့သင်ကူးယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
.gimp-2.8 / themes / symbololic-gimp
.gimp-2.8 တစ်ခုလုံးကိုဖျက်မိလျှင်သင်၌ရှိသော Gimp settings အားလုံးကိုသင်ရှုံးသည်။
themes များဖိုဒါတွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများကို /usr/share/gimp/2.0/themes/photoshopware သို့ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။
တောက်ပသော။ CGArtist အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုပြောင်းရွှေ့ရန် (ဖြစ်နိုင်သမျှဝေးဝေး) ဆန္ဒရှိသော်လည်းဘာမျှမလုပ်သော်လည်း layouts နှင့်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသောအခါအပြောင်းအလဲသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါအတိအကျကြောင့် Krita ချစ်ကြတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ Photoshop ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည်ဤကိရိယာများကို retouching အမှားများကျော်လွန်ပြီးအမှန်တကယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွေးမိသည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Lightroom သို့မဟုတ် Retouching လုပ်ရန် Darktable ရှိသည်။ ) ငါအခါအားလျော်စွာ (2D ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုငါ Krita ကြိုက်တတ်တဲ့။
Mr. Boat အားပြန်ပြောပါ
Diego redero ဟုသူကပြောသည်
Diego Redero အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ Gimp ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးချခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူဟာကျွမ်းကျင်မှုသိပ်မရှိပေမယ့်ကျွန်မရဲ့သေးငယ်တဲ့အလုပ်တွေ၊ ဂရပ်ဖစ်တွေထဲကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အခုတော့ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုကူးစက်နိုင်ပါပြီ။ Buddy Cheers!
Akira kazama ဟုသူကပြောသည်
ငါကသဘောကျတယ်၊ ငါဒီချိန်ညှိမှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးနေတယ်၊ ​​တချို့အကြောင်းပြချက်ကြောင့် GIMP ကိုပိတ်ပစ်ဖို့အချိန်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေတယ်၊ ​​တခါတလေ၊ ဒီပရိုဂရမ်ကတုန့်ပြန်မှုမရှိဘူး၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့နောက်ဆုံးတော့ပိတ်သွားတယ်။
Akira Kazama အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါသခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ် Gimp ကိုစတင်သောအခါမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်ဆန့်ကျင်လျက်သင်လျှောက်ထားသည့်သတိပေး ၀ င်းဒိုးသည်ပိတ်ခြင်းကိုတောင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုဘဲမိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းသည်ခဏပေါ်လာပါကသင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ထူးဆန်းသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လက်တော့ဟောင်းတွင်သာပြုလုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ desktop ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သတိထားပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာ၌မည်သည့်စက်ကိရိယာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှစ်ခုပေါ်တွင် modod ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်၍ မှတ်ချက်ပေးပါသည်။
ပိုပြီးအဆင့်မြင့်သူတစ် ဦး ဦး ထံမှအကြံဥာဏ်များ။
ကျွန်ုပ်၏ Athlon II X2 ဟောင်းနှင့်ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ FX 6300 နှင့်အတူထူးဆန်းသည်မှာငါ GIMP ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ခဲ့ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှစ်ခုလုံးတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဒုတိယအကြိမ်မှပိတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Palace ဇာက်နန်းတော် ဟုသူကပြောသည်
အဲ့ wapo က GIMP ဒီဇိုင်းကိုငါမကြိုက်ဘူး၊ သီးခြား tabs ၂၀ ရှိတာကိုငါမကြိုက်ဘူး။
Isaac Palacio ကိုပြန်ပြောပါ
Gimp ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်မှာ XCF standard extension ရှိတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုပေါ့ပါးတဲ့ JPG အဖြစ်ပြောင်းဖို့သင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။
Debian နှင့် ArchLinux သုံးစွဲသူဟောင်းမှ… FreeBSD Unix မှနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။
GIMP ၏မူရင်းပုံစံသည် XCF ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖိုင်များ၊ အလွှာများ၊ လမ်းကြောင်းများစသဖြင့်သင့်ရဲ့ဖိုင်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပို့ကုန်နှင့်တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများမှတဆင့်သင်သည် JPG, PNG သို့မဟုတ် GIF ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြုပြင်။ သိမ်းနိုင်သည်။
စကားမစပ်၊ အလွှာများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကာတွန်း GIF တစ်ခုလုပ်ရန် (သို့) PDF ထုတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
အခုငါ KRITA ကိုစောင့်ကြည့်သင့်တယ်ထင်တယ်။ gimp ထက်ဘာကြောင့်ဒီထက်အများကြီးပိုကောင်းတာလဲဆိုတာငါမသိပါဘူး။
ဒီမှာကျားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ camepam သွားပါ
ဒီ site နှင့်၎င်း၏ geek လှည့်ကွက်။ Gimp ကိုငါကြိုက်တယ်။ Unified window feature နဲ့သူကတခြားသူနဲ့တူအောင်ငါမလိုအပ်ဘူး။
နှင့် windows ဗားရှင်းအဘို့လည်းအလုပ်လုပ်?
ဤသည် mod သည်ကြီးလှ၏။ ၎င်းသည် Gimp ကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောကြည့်ရှုစေသည်။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်ဤကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်၊ ၎င်းကို“ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုတည်း” နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အနည်းငယ်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ... မီးခိုးရောင်စကေးရှိ“ tools » dock ၏အိုင်ကွန်များသည်၎င်းကိုကြော့ရှင်းစွာကြည့်နိုင်သည်။ Jesus ကိုခွင့်ပြုပါ။ Dpixel ကို toolbar အတွက်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါ့မယ်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကိုငါအကြိုက်ဆုံးထဲထည့်လိုက်တယ်။ ) အခြားတစ်ဖက်နဲ့ menu တွေကနေအသစ်တွေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံမှန်အတိုင်း icon တွေကိုတွေ့ရတာသနားစရာပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤ mod မှပေးသော icon များသည် layer dock ရှိ tabs များထဲမှ tool များနှင့် brushes များ၏ရွေးချယ်စရာများအပြင်အောက်ခြေရှိရုပ်ပုံများနှင့်ပွင့်လင်းသောပုံရိပ်များ၏သမိုင်းကိုသယ်ဆောင်သွားသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သီးခြား ၀ င်းဒိုး၏ပရိသတ်များသည်မူရင်း Gimp ကဲ့သို့ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန် "windows" menu ရှိ "single window" mode ကို unchecking လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၁၀″ Hp mini တွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအနိမ့်ပိုင်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကြောင့်သီးခြား ၀ င်းဒိုးတွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၁၇″ မော်နီတာရှိသောကျွန်ုပ်၏ desktop ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤတစ်ခုတည်းသော ၀ င်းဒိုး mod "photoshopped" သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ S ... hehehe၊ ထင်မြင်ချက်နှင့်တိုက်ဆိုင်မှုသည်မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငါ KDE ဖြစ်ပေမဲ့အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသော Krita ကိုကြည့်ပြီး Xubuntu တွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းသည်။ ကျွန်ုပ်မသိသည်။ သို့သော်အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပြီးငါမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဟုထင်သည်။ သူသာကျွန်ုပ်ကိုတပ်ဆင်သည်ဆိုပါစို့။ KDE စာကြည့်တိုက်များကကျွန်ုပ်မလိုချင်သော applications များနှင့်အခြား package များကိုထည့်ပြီးဒီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ application များကိုစမ်းသပ်ခြင်းမှအမြဲတားဆီးသည်။
ဤကဲ့သို့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမျိုးကိုကျွန်ုပ်တစ် ဦး ဦး အားကျွန်ုပ်၏အသိပညာကခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒီ entry အတွက် DesdeLinux ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့မှတ်ချက်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကနေနိဂုံးချုပ်ကောက်ယူပါတယ်။ 🙂
ငါ Kubuntu 15.04 Beta2 ကိုစမ်းကြည့်ပြီးမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခဲ့တယ်။ )